ဘဝမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘဝမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့…..
Posted by who who on May 22, 2013 in Creative Writing, Think Different |6comments
ညီမငယ်တစ်ယောက် မေးလာတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခု.. “ What is the most important thing in life ? ” ဆိုတာလေး။ ဒါလေးကို ကျနော့်အမြင်အရ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ဖြေကြည့်မယ်နော်။ In my opinion , the most important thing in life is “ wisdom ” . ဒါဆို ဒီ wisdom အကြောင်းကို ရှင်းပြပါမယ်နော် ။ ဗမာလို သိကြတာက “ဉာဏ်ပညာ” ပေ့ါ ။ တကယ့် အနှစ်သာရ ကတော့ True wisdom သည် …
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းစွာနားလည်နိုင်ခြင်း လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲစမ်းစစ်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်မျိုး ရှိနေသင့်တယ်။ ကိုယ်ဒေါသ ထွက်ရင် ထွက်နေတယ် သိရမယ် ၊ လောဘတွေ ကြီး နေပြန်ရင် လောဘ ဖြစ်နေပြန်ပြီ လို့သိနေရမယ် ။ မောဟလည်း ဒီတိုင်းပဲ ။ တကယ့် တကယ်တန်း တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မစမ်း စစ်ပဲ သူများကိုသာ ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်း အလုပ်နဲ ့ပဲ အချိန်တွေ ကုန်နေကြတာခပ်များများ။ သူများ အကြောင်းတွေ ပြောလို့အချိန်ဖြုန်းနေပြီး ကိုယ့်အကြောင်း ကို သိအောင် လုပ်ဖို့အချိန်မရကြဘူးလေ။
ဒီနေရာမှာ ဉာဏ်ဟာ သိပ်အရေးကြီးသွားပြိီနော်။ ကျနော်ပြောချင်တာက ဘွဲ ့တွေ ၊ ရာထူးတွေ နဲ ့ဘာမှ မဆိုင်ပါ ဘူး ။ သူကတော့ PhD ရထားတာ ဉာဏ်ကြီးမှာပဲလို့ယူဆလို ့မရပါဘူး ။ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လောက်နားလည် နိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ ဉာဏ်လေး ရှိဖို့ ပဲ အရေး ကြီးတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းတာနဲ ့လည်း မဆိုင်ဘူးနော်။ ဒီအခု ပြောတဲ့ ဉာဏ် ကတော့ လူတွေ သတ်မှတ်ပေးလို ့မရတဲ့ ကိုယ်သာ သိတဲ့ ဉာဏ် မျိုးပေ့ါ ။ ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေး။ ငါ ဖြစ်နေတာဘာလဲ ? ။ ငါ ဘာကို လိုချင်နေတာလဲ ? ။ ဘာလို ့လိုချင်တာလဲ ? ။ Why တွေသာ ဆက်မေးကြည့်လိုက် ဘာမှ မဟုတ်တာကို ပုံကြီးချဲ့နေပါလားလို ့မြင်လာ လိမ့်မယ် ။
နောက်တစ်ခုက လူတိုင်းဟာ ဘဝမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင် “ စိတ်ချမ်းသာမှု့ ” ပဲလို ဖြေချင်ကြပါ တယ် ။ ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တယ် ။ စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအနောက်အကျိတွေ ကင်းဝေး နေမှ စိတ်ချမ်းသာတာပါ။ တကယ့် “ စိတ်ချမ်းသာမှု့အစစ် ” ရဖို ့ကျတော့ “ ဉာဏ်ချမ်းသာ” မှ ကို ဖြစ်မှာနော်။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာမှု့ မရနိုင်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာပဲ ဖြစ်လာဖြစ်လာ ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို နားလည်အောင် ကြည့်တတ်၊ ဆုံးမတတ်၊ ခိုင်းတတ်တဲ့ ဉာဏ်ရှိမှ အရာရာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော့် အတွေးအခေါ်အရ ကတော့ “ ဉာဏ် ” ဟာ ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးပဲလို ့ဆိုချင်ပါတယ်။ တနည်း ပြောရရင် ကိုယ့်စိတ်ကို တိုက်ရိုက် ကြည့်တတ်ပြီး control လုပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကို ပြောချင်ပါတယ်နော်။ ဒီလို ဉာဏ်လေးသာ ရှိထားရင် ဘယ်နေရာသွားသွား ၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့တွေ ့၊ ဘာကိစ္စပဲ ပေါ်ပေါ် အားလုံး အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ကိုယ့်စိတ်လေးကို ထိုးထွင်းပြီး နားလည်နေလို့ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ ထူးပြီး စောင့်ရှောက်စရာမလိုပဲ သူ ့ကိုယ်သူ စောင့်ရှောက်နိုင်သွားပါပြီ ။
ဉာဏ်ပါတဲ့သူဟာ သူများပြောတဲ့ စကားကို နားထောင်ရင်တောင် ဉာဏ်နား လေးနဲ့နားထောင်နိုင်လို့ ကိုယ့်နဲ့အယူအဆမတူတဲ့ လူပြောတဲ့ အပေါ်မှာ လည်း view မျိုးစုံ ကနေ လက်ခံနားထောင်ပြီး စဉ်စားတတ်နေတာပေ့ါ။ ကိုယ့် အယူအဆသာ မှန်ရမယ် ကျန်တာတွေ မှားကို မှားတယ်ဆိုတာမျိုး “ အတ္တ ” တွေနဲ့သူများ အယူအဆကို နားထောင်လက်ခံခြင်း မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါဉာဏ်နား မရှိသေးဘူးပေ့ါ။ အဲ ဉာဏ်နားလေးနဲ့နားထောင်လို့အမှား၊ အမှန် ခွဲခြားလို ့၊ ဘာကွာသွားလဲ ဘယ်ဟာက ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်ဟာ ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့တွေးလို့ကိုယ့်ဘက်က ပြင်သင့်တာတွေ ထွက်လာရင်လည်း တန်းပြီး ပြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လက်ကိုင် ထားတာဟာ အမြဲမှန်နေမယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ကိစ္စ တစ်ခု အပေါ် လက်ခံစဥ်းစားမှ သာ အဖြေမှန်ထွက်လာမှာပါနော်။
ကိုယ်ကိုကိုယ် နားမလည်နိုင်သောသူသည် သူတစ်ပါးအပေါ် နားလည်ပေးဖို ့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို အထင်းသား ၊ အရှင်းသားနားလည်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်မျိုးရမှာသာ သူတစ်ပါးမှာ ဒီလို အခြေအနေ တွေတွေ့လာရင် ဒီလို စိတ်ကလေးတွေ ဝင်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ ထည့် စဉ်းစားနိုင်မှာပါနော်။ ဒါက တော့ ကျနော့် ရဲ့ idea ပေါ့လေ။ ကျနော့်အနေနဲ့တခြားလူတွေ ကပေးတဲ့ idea လေးတွေလည်း သိချင် ၊ ကြားချင် ပါသေးတယ် ။ ကိုယ့်အတွက် ကတော့ ငွေကြေးချမ်းသာတာ ၊ ဆင်းရဲတာလည်း အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ ဘွဲ ့ထူး၊ ရာထူးတွေကလည်း အဓိက မဟုတ်တော့ဘူး ၊ အရာရာအပေါ် စဉ်းစားဆင်ခြင် သုံးသပ်လို ့ဖြစ်သင့်တာနဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေအပေါ် မှန်ကန်စွာ ဦးစားပေး နိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လေးချနိုင်တဲ့ ဉာဏ်လေးသာ အဓိက ဖြစ်နေပါတယ် ။
အကယ်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရင်၊ ပြောချင်တာက အပြစ်မဖြစ်အောင် နေနိုင်ဖို့သတိလေး ဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကို ပဲ့ကိုင်လို ့မှားနေရင် ပြင်လို့ ၊ကောင်းနေရင် ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားလို့၊ ကိုယ်နဲ့ ဆက်စပ်သမျှ လူတိုင်းအပေါ် အေးချမ်းသွားအောင် ကူညီနိုင်တဲ့ ပညာဉာဏ်လေးသာရှိရင် စိတ်ချမ်းသာမှု့ အစစ် ဆိုတာ ကိုယ်လည်းရမယ် ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့လူလည်း ရကြမှာမို ့wisdom သာလျှင် ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်နော် ။
အကယ်၍ စာဖတ်သူများရဲ့ important things လေးတွေ သိခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း သိချင်ပါသေးတယ်။ ကျနော့်ကိုလည်း reply လေးနဲ့ဝေမျှပေးဦးနော်။
“ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည်ညိုနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို ့က အရေးကြီးဆုံးပါ ” ဒါကတော့ ကျနော့်ရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆလေးပါပဲ ။
ကျုပ် ဆီမှာ နောက်ဆုံးအကောင်းပကတိကျန်ဟေ့ဆိုရင်လည်း အတွေးအခေါ်မှန်ကန်တဲ့ ဦးနှောက်လေးရယ်၊ ဆင်ခြင်ဉာဏ်လေးရယ်ပဲကျန်ချင်တယ်။
((အကယ်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရင်၊ ပြောချင်တာက အပြစ်မဖြစ်အောင် နေနိုင်ဖို့သတိလေး ဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကို ပဲ့ကိုင်လို ့မှားနေရင် ပြင်လို့ ၊ကောင်းနေရင် ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားလို့၊ ကိုယ်နဲ့ ဆက်စပ်သမျှ လူတိုင်းအပေါ် အေးချမ်းသွားအောင် ကူညီနိုင်တဲ့ ပညာဉာဏ်လေးသာရှိရင် စိတ်ချမ်းသာမှု့ အစစ် ဆိုတာ ကိုယ်လည်းရမယ် ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့လူလည်း ရကြမှာမို ့wisdom သာလျှင် ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်နော် ။))
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားစာသားတွေပါ ဟူးဟူး ရေ။
အောင်မြင်ခြင်းတွေထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကို အောင်နိုင်ဖို့ က အခက်ခဲဆုံးလို့ ကြားဖူးတာဘဲ။
ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို အမြဲ စမ်းစစ် နေနိုင်ဖို့က တင် တော်ရုံမလုပ်နိုင်/ မလုပ်တတ်ကြဘူး။
သတိမပြတ်ဖို့ အကျင့်အကြံ ဆိုတာ ဘာသာရေးအတွက်မှ မဟုတ် နေ့စဉ် လောကမှာပါ ထည့်သုံးတတ်ရင် အကျိုးများပါတယ်။
အရီးလဲ ကြိုးစားကြည့်နေပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ တကယ်ခက်သားကလား။
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံ ဘယ်ပြေးမလဲ လို့ တော့ မှန်းရတာပါဘဲ။
ဝှူးလေးဆီမှာ တပည့်အဖြစ် နေခွင့်ပြုပါလားကွယ်
အဲဒီ ဉာဏ် မျိုး ရဖို့၊ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဝှူးလေး ကူညီစောင်မ ပေးမှ
အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေမှာမို ့ပါ ကွယ်
“ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည်ညိုနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို ့က အရေးကြီးဆုံးပါ ”
အဲ.ဒီ စကားလေးက အမှန်ဆုံးပါပဲ…
ဒါပေမဲ. အဲ.ဒီလို ဖြစ်ဖို.ဆိုတာတော. တော်တော် မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်ရှင်.
အင်မတန်အကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပါ ဟူးဟူး ရေ။
ဒါပေမဲ့ ရသလောက်ကြိုးစား ..ကြိုးစားလို့ရသလောက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်..
အတွေးအခေါ်လေးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ အကျိုးရှိသော ပိုစ့်လေးပါ who2 ရယ်။
ဟိုစကားလေးတော့ သတိရသွားတယ် “ကံမရှိ ဉာဏ်ရှိတိုင်း မွဲ´´။